नेपाली विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया नै किन रोज्छन् ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १३ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०८:०३ |
मेलबर्न । अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाइमा परेको देशमा अष्ट्रेलिया सम्भवतः पहिलो नम्बरमा पर्दछ । अहिले औसतमा हरेक वर्ष १० हजार नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आउने गरेका छन् । विश्वकै उत्कृष्ट जीवनशैली,विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री,कामको अवसर र साँच्चिकै पढ्न जानेका लागि सहज भिसा प्रक्रियाका कारण अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाइको मुलुक बनिरहेकोमा दुई मत छैन । तर स्वयम् विद्यार्थीहरु चाहिं के भन्छन् त ? उनीहरु अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया नै किन रोजाईमा पर्छन् त ? अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरि अष्ट्रेलिया उड्ने तर्खरमा रहेका विद्यार्थी लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईका अनुभवहरु पढौं :
विदेश अध्ययनमा फेरियो मन
मलाई शुरुमा विदेश अध्ययनमा जान चाहना थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रयास गरेको थिएँ । आइओएममा सीमित सिटका कारण नाम निस्केन । त्यसपछि साथी र आफन्तहरुको सल्लाहमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने मनस्थिति बनाएँ ।
अरु देशभन्दा मलाई अष्ट्रेलिया मन पर्यो । अष्ट्रेलियाको शैक्षिकदेखि समग्र वातावरण राम्रो पाएँ । सुरक्षित ठाउँ,पढ्ने राम्रो वातावरण र शैक्षिक डिग्री पनि अन्तराष्ट्रियस्तरको भएकोले मेरो रोजाइमा परेको हो । त्यहाँ अध्ययन गरिसकेपछि करिअर पनि राम्रो छ । त्यसो त नेपालमा पनि करियर नभएको भने होइन तर यहाँभन्दा अष्ट्रेलियामा पढेर राम्रो गर्नसक्छु भन्ने विश्वास छ । अष्ट्रेलियामा नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ र नेपालमा फर्केर अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
मैले अहिले स्नातक तहमा आइटी पढ्ने निर्णय गरेर त्यस अनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छु । अष्ट्रेलियाको राम्रो विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जाँदैछु । अहिले आइटीको संसारमै स्कोप राम्रो छ । मेरो रुची पनि आइटी नै हो । स्नातकपछि सफ्टवयरमा अध्ययन गर्ने रुचि छ । घर,अफिस जहाँ पनि आइटीकै अवसर छ । त्यसैले अष्ट्रेलियामा आइटी पढेर अझ जिन्दगीमा अघि बढ्छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।
Previousफेवाताल अतिक्रमण गर्ने रिसोर्ट सञ्चालक विज्ञ समूहमा छानिए
Next‘गेट आउट’ भन्दैमा नेतृत्व छोडिन्नः देउवा
अष्ट्रेलिया आएर यतै बस्नेहरु कति खुशी ? यस्तो बताउँछ अनुसन्धान
१३ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०७:४९
अमेरिकामा भिडियो कल गर्दै नेपाली युवाले गरे आत्महत्या
१७ मंसिर २०७५, सोमबार ०१:३४